South Africa Assures Africa of Its Commitment to the Continent - allAfrica.com
South Africa's President Cyril Ramaphosa has restated his country's commitment to fostering good relations not only with Nigeria but with the rest of the African continent. During the state visit by Nigeria's President Muhammadu Buhari, Ramaphosa said that the African Continental Free Trade Agreement would help to grow African countries reliance on each other for trade and investment.
South Africa and Nigeria, Africa's two economic powerhouses, saw President Cyril Ramaphosa and President Muhammadu Buhari meet during a state visit on October 3. Read more »
Since the end of apartheid in South Africa in 1994, South Africa and Nigeria have never had an easy relationship. Over the years, as different presidents have come and gone, the… Read more »
African Arguments, 8 October 2019
On 14 September, Cyril Ramaphosa was booed as he spoke at Robert Mugabe's funeral in Zimbabwe. Forced off script, the South African president apologised again for the most recent… Read more »
The Conversation Africa, 8 October 2019
There were mixed feelings among Nigerians over President Muhammadu Buhari's state visit to South Africa because of the recent xenophobic attacks in the country. While many… Read more »